သင်၏ GNU / Linux ကိုအရည်အသွေးရှိသော Gamer Distro အဖြစ်ပြောင်းပါ Linux မှ
MinerOS 1.1: Multimedia & Gamer Distro တစ်ခု
GNU / Linux နှင့်ပတ်သက်လျှင်၊ သာမာန်အသုံးပြုသူများ၊ အတွေ့အကြုံရှိသူများ၊ သို့မဟုတ် Windows နှင့် Mac OS ကိုနှစ်သက်သူများသည်ဂိမ်းကစားခြင်းနယ်ပယ်တွင်ကန့်သတ်ချက်များရှိနေခြင်းကြောင့်၎င်းကိုအလေးအနက်ထားမည်မဟုတ်ပါတစ်နည်းဆိုရသော်၎င်းတို့သည် Gamer » GNU / Linux Operating System အနေဖြင့်တန်ဖိုးမထားဟုယူဆကြသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည် Linux ဂိမ်းများကိုကောင်းစွာအထောက်အပံ့မပေးနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကောင်းဂိမ်းများသို့မဟုတ်အရည်အသွေးအနည်းငယ်သာရရှိနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီကဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသောအဖြစ်မှန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်၊ သို့သော် GNU / Linux အတွက်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဂိမ်းများစွာရှိသောကြောင့်ယနေ့တွင်၎င်းသည်လုံးဝမမှန်ကန်ပါ။၎င်းတို့အားတရားဝင်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများမှကူးယူခြင်းသို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများမှတဆင့်ရရှိနိုင်သည်။ Wine မှတဆင့် Q4Wine၊ Playonlinux သို့မဟုတ် Crossover၊ Flatpak နှင့် Winepak တို့ဖြင့် emulation မှတစ်ဆင့်တပ်ဆင်နိုင်သော Windows အခြေခံဂိမ်းများလည်းရှိသည်။
MX-Linux ကိုအသုံးပြုပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင် Distro Gamer ကို Flatpak နှင့် Winepak ပြုလုပ်ပါ
Game Lovers (Gamers) အတွက် Operating Systems အနေဖြင့် GNU / Linux Operating Systems ကိုဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံ၏အရည်အသွေးဖြစ်သည်။ ဂိမ်းများအတွက်မည်သည့် distro ကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်သော်လည်းအထူးပြုလုပ်ထားသောအထူးပစ္စည်းအချို့ရှိသည်။
1 Distros ဂိမ်းကစားသူများ
2 သင့်ကိုယ်ပိုင် Distro Gamer ကိုတည်ဆောက်ပါ
2.1 1.- လိုအပ်သော application များနှင့်စာကြည့်တိုက်များအပြင်အခြေခံဂိမ်းများတပ်ဆင်ခြင်း
2.2 Multi- ပလက်ဖောင်းဂိမ်းများအတွက်အဆင့်မြင့် applications များတပ်ဆင်ခြင်း
2.3 ၃. Game Managers ကို Linux အတွက် Clients များနှင့်ထည့်ပါ
2.4 ၄။ Repositories မှ Retro Game Console Emulators ကို Install လုပ်ပါ
2.5 5.- Playdeb, Flatpak နှင့် Winepak ကို Install လုပ်ပါ
ဂိမ်းကစားသည့်အခါပိုကောင်းသောအရည်အသွေးအတွေ့အကြုံကိုကမ်းလှမ်းရန်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူအချို့ ထူးချွန်သောဂိမ်း distros ။ ယင်းတို့ထဲမှများမှာ -
ဒီထိပ်တန်းဆယ်ပါး GNU / Linux ဖြန့်ဝေမှုများသည်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပြီးကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကစားခြင်းအနုပညာအတွက်သင့်လျော်သောအခမဲ့ Operating Systems အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ တစ်ခုချင်းစီသည် ၄ ​​င်း၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များကွဲပြားသည်၊ ထို့ကြောင့်လူတစ် ဦး စီ၏ကိုယ်ပိုင်အရသာအပေါ်တွင်များစွာမူတည်သည်။ ပြီးပြီရပ်စဲတစ် ဦး ကအလွန်ကောင်းသောတ ဦး တည်းဖြစ်ခဲ့သည် Linux ကိုဖွင့်ပါ။ Lakka တွင်အထူးဖော်ပြချက်တစ်ခုရှိပြီး Raspberry PI-type microcomputers တွင်ထည့်သွင်းရန်အလွန်ကောင်းသော Distro ဖြစ်သော DesdeLinux အတွက်ယခင်ဆောင်းပါး။
MinerOS ၁.၁ ဂိမ်းများစာရင်း ၁
သင့်ကိုယ်ပိုင် Distro Gamer ကိုတည်ဆောက်ပါ
အထက်ဖော်ပြပါ Distros Gamers သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်သင်၏အသင်းအဖွဲ့များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါကဖြစ်နိုင်ခြေအမြဲရှိသည် သင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းများကို run ရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်လက်ရှိ distro ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်၊ သင်၏ Distro တွင်အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအကြံပြုလိုပါသည်။ သို့မှသာ၎င်းကိုအကောင်းဆုံးနှင့်သင်၏လက်ရှိ GNU / Linux Distro တွင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဂိမ်းများကိုခံစားနိုင်သည်။
1.- လိုအပ်သော application များနှင့်စာကြည့်တိုက်များအပြင်အခြေခံဂိမ်းများတပ်ဆင်ခြင်း
Multi- ပလက်ဖောင်းဂိမ်းများအတွက်အဆင့်မြင့် applications များတပ်ဆင်ခြင်း
၃. Game Managers ကို Linux အတွက် Clients များနှင့်ထည့်ပါ
၄။ Repositories မှ Retro Game Console Emulators ကို Install လုပ်ပါ
Q4Wine နှင့် Winetricks ကို သုံး၍ Wine မှတစ်ဆင့် Windows application များ၊ ဂိမ်းများနှင့်လိုက်ဖက်ခြင်း။
5.- Playdeb, Flatpak နှင့် Winepak ကို Install လုပ်ပါ
Windows application များနှင့်ဂိမ်းများနှင့် Wine မှတစ်ဆင့် Q4Wine, Winetricks နှင့် Crossover ကိုအသုံးပြုခြင်း။
မှတ်စု: သင်တို့သည်လည်းထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ် Snap command ကိုအမိန့်နှင့်အတူ "Sudo apt install snapd" ဒါပေမယ့်ဒီထုပ်ပိုးတဲ့နည်းပညာမှာ install လုပ်ဖို့သက်ဆိုင်ရာဂိမ်းတွေမရှိသေးပါဘူး။
ယခုအချိန်အထိမည်သည့် GNU / Linux Distro မဆိုသာမန်အိမ် (သို့) ရုံးသုံးပစ္စည်းများအတွက် Distro ထက်ဂိမ်းအဆင့်တွင်အတွေ့အကြုံများစွာကိုပေးသင့်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » သင်၏ GNU / Linux ကို Distro Gamer အဖြစ်ပြောင်းလဲပါ
ဦး လေး ဟုသူကပြောသည်
Arch-based distros တွေအတွက်တော့ apt-get command တွေက debian distros တွေအတွက်ပါ
Arch ကိုကျွန်တော်မသုံးပါဘူး၊ ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းပါးကသင့်ကိုကူညီပါလိမ့်မယ်။ https://wiki.archlinux.org/index.php/Pacman_(Espa%C3%B1ol)#Instalar_paquetes
MX-Linux 17.1: ခေတ်မီ။ အလင်း၊ အစွမ်းထက်။ ဖော်ရွေသော Distro ။